रामजी ज्ञवालीको निर्देशनमा छोटो चलचित्र ‘लक डाउन’ सार्वजनिक - Sabal Post
बुटवल – कोरोना अर्थात कोभिड–१९ का कारण यतिबेला संसारभरका नागरिक ठुलो समस्यासँग जुधिरहेका छन् । कोरोनाको प्रभाव बढ्दै गएपछि विभिन्न देशले लकडाउन सुरु गरे, जुन अहिलेसम्म अधिकांश देशमा जारी छ ।
लक डाउन पुर्ण रुपमा कहिले खुल्छ ? त्यो अहिल्यै अनुमान गर्न सक्ने स्थिती छैन । तर, लकडाउन सुरु भएपछि आम नागरिकहरुले के कस्तो समस्या झेल्नुपरेको छ ? चलचित्र लक डाउनमा समेट्ने प्रयास गरिएको छ । सार्वजनिक छोटो चलचित्र लक डाउनमा एक सम्पन्न युवाको लक कसरी डाउन भइरहेको छ भन्ने देखाउन खोजिएको छ ।
आर्थिक अवस्थाले झन् झन् तड्पिरहेका युवाकी प्रेमिकाले आफ्ना प्रेमीको अवस्था बुभेर उनीप्रति देखाएको सद्भाव र सहयोगले धेरैलाई भावुक बनाउन सक्छ ।
द सेलिब्रेटी टाइम्सको ब्यानरमा निर्माण गरिएको चलचित्रको मुख्य भुमिकामा अभिविन्द खनियाले निकै राम्रो अभिनय गरेका छन्, उनीसँगै बर्षा भण्डारी, अनिकेत अधिकारी र प्रख्यात घिमिरेको समेत सहायक भुमिका हेर्न लायक छ ।
चलचित्रलाई संचारकर्मी रामजी ज्ञवालीले लेखन तथा निर्देशन गरेका हुन् । उनले निर्देशन गरेको अर्को छोटो चलचित्र छिट्टै प्रदर्शन गर्ने तयारी छ । निमा शेर्पाको छायांकन तथा सम्पादनमा निर्माण भएको चलचित्रलाई काठमाडौं र ललितपुरका विभिन्न स्थानमा खिचिएको हो ।
प्रदेश २ का मुख्य मन्त्रीलाई गगनको चेतावनीः…
‘बादल’का भाइ नरेशलाई थुनामा राख्न उच्च अदालतको…
प्रसिद्ध बैज्ञानिक हकिङ्सका मनन गर्नैपर्ने महानवाणीहरु
शिक्षण अनुमतिपत्रको परीक्षाफल प्रकाशित
पश्चिम नवलपरासीमा एकै दिन ४० जनामा कोरोना…